Ramón Gómez de la Serna: weiyo maguguia uye zvimwe zvigayo zveshuga | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Nhoroondo yezvinyorwa, Mabhuku
Ramón Gómez de la Serna aive munyori ane mukurumbira uye ane hunyanzvi wechiSpanish, achifungidzirwa semumwe wevanonyanya kukosha kunyora nyika inotaura chiSpanish. Yakanga iine maitiro ayo akasarudzika uye asina hunhu; kwaari kuvambwa kwemhando ye "las greguerías" inokweretwa. Nemhando iyi yezvinyorwa zvinongoerekana zvaitika, munyori akaburitsa huwandu hwakanaka hwemabhuku, ayo anoonekwa seanotangisisa kuzvitonga; pakati padzo kumira: Gregueries (1917) uye muunganidzwa of greguerías (1955).
Kunyangwe magugeria ake akamupa kuzivikanwa, ivo zvakare Akasimudzira kutsikiswa kwemanovels gumi nemasere - anozivikanwa nekuve nenhoroondo dzekunyepedzera dzehupenyu hwake-. Yekutanga yaive La mutema nemuchena chirikadzi (1917), nyaya umo mune runyerekupe rwekuti pane ruzivo rwehukama hwake naCarmen de Burgos. Atotapwa muBuenos Aires, akaburitsa rimwe remabasa ake akakosha kwazvo ehupenyu: kuzvifira (1948).
1 Biographical chidimbu cheGómez de la Serna
1.1 Mabasa ekutanga ekunyora
1.2 Prometheus Magazini
1.3 Kugadzirwa kwe «las greguerías»
1.4 Rufu rwaGómez de la Serna
2 Mamwe mabhuku akanyorwa naRamón Gómez de la Serna
2.1 Chirikadzi Nhema uye Ichena (1917)
2.2 Iyo Isingaiti (1922)
2.3 Iyo Amber Mukadzi (1927)
2.4 Iyo Knight yeGrey Mushroom (1928)
2.5 Kuzvifa (1948)
Biographical chidimbu cheGómez de la Serna
Musi weChipiri Chikunguru 3, 1888 - mutaundi reRejas, Madrid - Ramón Javier José y Eulogio akazvarwa. Vabereki vake vaive gweta Javier Gómez de la Serna naJosefa Puig Coronado. Semhedzisiro yeSpanish -American Hondo (1898), mhuri yake yakafunga kutamira kuPalencia. Mudunhu iro akatanga zvidzidzo zvake pachikoro chePiarist cheSan Isidoro.
Makore matatu gare gare, baba vake vakasarudzwa semutevedzeri weRiberal. Naizvozvo, Vanodzokera kuMadrid, uko Ramón akaenderera mberi nekudzidziswa kwake kuInitituto Cardenal Cisneros. Muna 1902, pazera remakore gumi nemana, akatanga kutsikisa El Postal, Zvinyorwa zveDziviriro yeKodzero dzeVadzidzi, magazini ine mifananidzo uye zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvakanyorwa nemaoko.
Paakapedza chikoro chesekondari, akanyoresa muChikoro cheMutemo - kunyangwe asina hukama hwebasa iri. Muna 1905, uye nekuda kwemari yababa vake, akaburitsa bhuku rake rekutanga: Kupinda mumoto. Munguva ya1908, akaenderera mberi nedzidzo yake yemutemo kuYunivhesiti yeOviedo. Saizvozvo, ane shungu yekunyora, akaburitsa gore rimwe chetero basa rake rechipiri: Zvinotyisa.
Mumazuva ake ekutanga semunyori, Gómez de la Serna akapinda mukunyora nhau; ipapo akaratidzira mavambo ake, inozivikanwa nekushoropodza nzanga. Yakagadzira iyo ongororo Prometheus, maanonyora pasi pezita rekunyepedzera "Tristán". Zvinyorwa zvaakagadzira mune iyo svikiro zvakatsigira mitemo yababa vake. Akashorwa zvikuru nekuda kwezvinyorwa zvake, akafungidzirwa: "… iconoclast, anarchist yetsamba, anomhura".
Kugadzirwa kwe «las greguerías»
Aya ndiwo akasarudzika mabasa ekunyora, mhedzisiro yekubva kwavo, ungwaru uye kutsunga. Anovaparidzira zviri pamutemo muna 1910 uye anovatsanangura se "fananidzo pamwe nekuseka." Ivo, mavari, mapfupi aphoristic matauriro anofumura tsika dzekugara vachishandisa kutsvinya uye kuseka. Kuti aite izvi, akashandisa zvisina kujairika chokwadi, zvinyorwa zvehunyanzvi kana mitambo yepfungwa.
Rufu rwaGómez de la Serna
Quote naRamón Gómez de la Serna
Muhupenyu hwake hwese, munyori akavaka yakasimba zvinyorwa zvinyorwa zvine zvinyorwa, zvinyorwa, nhoroondo, uye mitambo. Zvinyorwa zvake zvakashanda semuenzaniso kuzvizvarwa zvinotevera. Vatsoropodzi vanomutora semumwe wevanyori vane mukurumbira veSpanish. Mushure memakakatanwa ehondo a1936, Gomez we Serna akatamira kuArgentina, kwaakagara kusvika parufu rwake muna Ndira 12, 1963.
Mamwe mabhuku akanyorwa naRamón Gómez de la Serna
Mukadzi mutema nemuchena (1917)
Ndicho nhoroondo yepfungwa yakaiswa muMadrid. Iine mavara maviri makuru: hedonist Rodrigo uye chirikadzi Cristina. Rimwe zuva, murume akaenda kumisa uye ainetseka nezvemukadzi anonzwisisa uyo aizo reurura. Mushure mekunyengerera mukadzi, akadzorerwa, uye nguva pfupi gare gare vakatanga kuva vadikani. Kubva ipapo, Rodrigo akazvipira kushanyira Cristina mumba make masikati ese.
Mukadzi -chibereko chemaronda ake yapfuura Matrimonio- anga ave munhu akasviba. Rodrigo akazviziva, uye nekuda kwazvo, kusangana mushure memusangano, akatanga kuzadzwa nekutya. Yakadaro yaive mamiriro ake, izvo murume akapindwa nekufungidzira pazvikonzero zvekufirwa nemudiwa wake. Zvese izvi zvakagadzira mhepo yekufungira kuti mupfungwa zvakamudzikamisa, achimuzadza nekusagadzikana uye kusahadzika.
Chirikadzi nhema nechena ...
Izvo Zvisingaiti (1922)
Mune ino rondedzero akati wandei madhisiki kubva kuhupenyu hwaGustavo anounzwa, munhu akabatwa ne izvo zvinonzi zvakaipa zvezana ramakore: "kusavimbika". Uyu murume wechidiki akaberekwa nguva isati yakwana uye ane kukura kwemuviri kwakaratidzirwa nekuvapo kwezvakanaka maficha. Chinhu chakajairika mukuvapo kwavo chinogara chiri shanduko, muchokwadi, zuva rega rega ivo vanowana mhando yenyaya dzakasiyana nyaya. Inopa pfungwa yekuti zvese zviroto, chokwadi chisina musoro umo rudo rwunogara ruri kutsvaga.
Iri basa rakasarudzika uye rinoonekwa semutangiri weiyo surrealist genre, sezvo rakaburitswa pamberi pemanifesto ekutanga nemabasa aKafka. Chinyorwa chakagadzirwa nehungwaru; Unhu hwayo hunosanganisira mazuva ano, nhetembo, kuseka, kufambira mberi uye gangaidzo. Iyo rondedzero ine chinyorwa chekuvhura naJulio Cortázar chakatsaurirwa kumunyori, uko kwaanoramba achiti: "Chekutanga kuchema kwekunzvenga mune zvakajairika zvinyorwa zvemanyepo."
Mukadzi weAmber (1927)
Iyo ipfupi novel yakaiswa muNaples, zvichibva pane zvakaitika nemunyori mune iro guta reItari. Chinyorwa chinorondedzerwa mumunhu wechitatu uye inotaurira nyaya yaLorenzo, murume anobva kuPalencia uyo anofamba kuenda kuguta reNeapolitan uye anosangana naLucia. Pakarepo vachida, vese vanorarama manzwiro asingaperi mukati merudo. Zvisinei, mhuri yaLucia inoramba hukama, nekuti mumwe wemadzitateguru ake akafa nekuda kweSpanish.
Mukadzi weAmber. [Pamusoro ...
Iyo knight yegrey howa (1928)
Icho rondedzero mumhando yechisimba ane nyeredzi Leonardo, nyanzvi con muimbi. Uyu murume, semhedzisiro yebasa rake rematsotsi, anorarama achimhanya, achitenderera mumaguta akasiyana siyana muEurope. Pane imwe yenzendo idzi, anosvika muParis, opinda mune imwe bazaar ndokusangana nengowani yegrey bowler; akafadzwa nazvo, anozvitenga. Paunobuda muchitoro, unoona kuti vanhu vanokuona zvakasiyana, sekunge iwe uri munhu akapfuma.
Kubva ipapo, Leonardo afunga kutora mukana weiyo bowler ngowani uye anopinda misangano yepamusoro yenzanga kuti aite hutsotsi hwake. Kwaari, ichi chinhu chiri nyore chave rombo rerombo rinomutendera kuti aite zvisakarurama zvake padanho repamusoro.
Iyo Mushroom Knight ...
Iri ibasa rehupenyu hwevanhu iro munyori akaita uye ruzhinji muArgentina aine makore makumi manomwe ekuberekwa. Vatsoropodzi venguva yacho vanoiona sebasa rake rakakodzera kwazvo. Chinyorwa chinotsanangura nguva yemakore makumi matanhatu ehupenyu hwake (pakati pa60 na1888). Mapeji aro anenge mazana masere ane mifananidzo uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neSpanish. Iyo ngano yehudiki hwake, hupenyu hwake semunyori uye kuti akura sei asingazvione.
Mumashoko ake okutanga, munyori wacho akati: “Ini ndangoronga kana ndichipedzisa nhoroondo yangu yehupenyu kuti ndipe kuchema kwemweya, tsvagai kuti ndinorarama uye kuti ndinofa, mukai maungira kuti muzive kana ndine izwi. Hana yangu yave kurerukirwa nekudzikama mushure mekunyora bhuku iri, mandiri ini ndinotora mabasa ese ehupenyu hwangu ”.
Kuzvipira-moribund 1 ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Ramon Gomez de la Serna